မှေးနေတုန်းမှာပွင့်လာတဲ့မီးလေး – Hlataw.com
သြော် ဒီကောင်မလေး သူ့အဒေါ်နဲ့ငါ ကိစ္စမှန်သမျှ အကုန်သိသွားတာကိုးဆိုပြီး အောက်ထပ် ဆင်းလာပြီး ကောင်မလေး အခန်းနားစွင့်ကြည့်တော့ အီ…အိး…အာ….အာ တွေထွက်လာတယ် ကောင်မလေး မရိုးတော့ဘူး ဒါနဲ့ နောက်နှစ်ရက်လောက် နေတော့ မနက်ရောက်တော့ ကော်ဖီး ငဲု့ပေးနေတဲ့ ကောင်မလေးကို ကြည့်လိုက်တော့ မျက်နှာမှာ ရှက်သွေး ပြန်နေတာ တွေ့နေရတယ် ဒါနဲ့ အလုပ်သွားဖို့ စဉ်ဆင်ပြီး ထွက်ခဲ့တယ် သြော် ဦးကျော်ရယ် ချိူစိတ်ထဲ သနားမိတာလား ပြောမပြတတ်ပါဘူး ညနေ ခြောက်နာရီလောက် ရောက် အဒေါ်ကမမျှော်ဘဲ ချိူက ဘာလို့ ဦးကျော်ကို မျှော်နေမိတာလဲ ဟူး ရနာရီခွဲကြတော့ ဦးကျော်ကား ရောက်လာခဲ့တယ် အဒေါ်လဲ အိမ်ပေါ်က ဆင်းလာပြီး ကျော်နော်…. တနေ့….တနေ့ မဟုတ်တော့ဘူး ….. အမ မပြောဘဲ နေနေတာ…. အလိုလိုက်လို့ နေ့တိုင်း သောက်သောက်လာနေတာ။
ဟင်.. ဦးကျော် …… စကားမဆုံးသေး ချိူပါးစပ်ပိတ်ပြီး အခန်းထဲ ဆွဲခေါ်သွားပြီး ကုတင်ပေါ် အတင်းလှဲပြီး အပေါ်က ဖိထားတယ် အရက်နံ့ကလဲ နံနေတာ ချိူပါးနှစ်ဘက် ကိုအတင်းနမ်းနေတယ် ပြီးတော့ လက်တစ်ဘက်က ချိူနို့တစ်လုံးပေါ် တအားကိုင်နေတာတွေ့နေရတယ် မဖြစ်သေးပါဘူး ဦးကျော် ဘာလုပ်မလို့လဲ မလုပ်ပါနဲ့ ချိူတောင်းပန်ပါတယ် ပြောသာ ပြောရတာ တကယ် ပြန်ထွက်သွားလည်း စိုးရိမ်နေမိတယ် ဦးကျော် မနေနိုင်လို့ပါ ချိူအဒေါ်ကလည်း ဦးကျော် ဆန္ဒကို မလိုက်ရောနိုင်လို့ ချိူကိုမြင်မိထဲက ချစ်နေမိတာပါ ဦးကျော် ပြောတာယုံပါ ချိူလဲ ဦးကျော် အမ ကိစ္စတွေ သိနေပြီးသားပါ ဦးကျော်သိပါတယ် ဦးကျော်ကို လိုက်ရော ပေးပါနော် ချိူ´ မဖြစ်ဘူးထင်တယ် ချိူကအခုမှ စမှာ ချိူကြောက်တယ် အဒေါ်သိရင်လည်း ချိူရော ဦးကျော်ပါ မကောင်းဘူး မဖြစ်ပါဘူး ဘာလို့ မဖြစ်ရမှာလည်း အဒေါ်မသိအောင် နေမှာပေါ့။
ဦးကျော်လီး တစ်ဝက်လောက် ရောက်တော့ ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်နေ ရင် ကောင်းကောင်းလားတယ် ဦးကျော် ချိူကောင်းလာပြီး သွင်းချင် သွင်းကြည့်လေဆိုပြီး စကားအဆုံး ဦးကျော်ရဲ့ လီးက အဆုံးထိ ဝင်လာမိတယ် အဒေါ်ပြောသလိုဘဲ တစ်အိမ်ကို လာထိတော့ ကြင်တာလိုလို ကောင်းသလို ခံစားမိတယ် ဒါနဲ့ ဦးကျော်လည်း မြန်မြန်လာပြီး အား အားအား ´ ကောင်းတယ် ဦး မြန်မြန်လေး ကောင်း…အာ မြန်မြန်လေး ဦး ….. မြန်မြန် ချိူပြီးသွားတယ် ဦးကျော်လဲ ပြီးပုံရတယ် ချိူအပေါ် မှောက်ပြီး မှေးနေတယ် နှစ်ယောက်လုံး အနားယူချိန်မှာ မီးက ထဖွင့်လာတယ် ဘုဒေါ ´´ တံခါး ပေါက်က အဒေါ် ခါးထောက်ပြီးအော်လိုက်တာ အခု နှစ်ယောက်လုံး ဆင်း …… ဆိုပြီး …… ပြီးပါပြီ။